Isifiso ukuze wonge isikhala e nursery lisikhuthaza ukuba sisebenzise ezihlukahlukene izixazululo. Lokhu Amasofa Transformers, amakhabethe imibhede, nemibhede embhedeni. Eminyakeni yamuva, abathengi baye baqaphela engilakhele isithunzi sobukhulu isakhiwo ezifana embhedeni Loft. Izibuyekezo abazali asivumela ukusho ukuthi lokhu ngempela ikhambi ezithakazelisayo igumbi kwengane.
Ngaphezu izinzuzo obungenakuphikwa bokuthi ukuhlukanisa yonke isakhiwo embhedeni (mklamo ongavamile, ukuqina, umnotho isikhala), embhedeni Loft unezinye izinzuzo. Lezi zihlanganisa:
Classic imodeli oluyisisekelo - luhlaka nge ngilala "izibuya" engenhla. Indlela ukuhlomisa endaweni isihlanganisi lokuqala, ikhasimende anganquma bebodwa. Ngokuvamile, abakhiqizi ngokudala lezi onobuhle ukunikela anhlobonhlobo ukucushwa kungenzeka: bele zangaphansi, linezingxenye ne emashalofini, izingubo zokugqoka niches fixed, itafula withdrawable noma embhedeni.
Akusiyo imfihlo ukuthi ngokuvamile kunzima ukuhlela yonke ifenisha nezinto umntwana kudingeka (futhi kulapho izingane ezimbili), ekamelweni elincane, ngoba udinga ukucabanga ukuthi kungenzeka abe ukunyakaza khulula. Ngakho-ke, lo mklamo kuyindlela enhle out - ngesikhathi uqimba lokuqala izinto wona compact futhi uthathe isikhala okuncane kakhulu.
Kuyinto kule design engenayo imingcele ngaphezulu. A ibanga phakathi eziyizitezi lokuqala nelesibili kusuka phezulu kanye ophahleni ibalwa kusukela kungenzeka ingane sihlezi embhedeni. Ukwehluka - design nge ingqalasizinda emphemeni izihlalo.
Loft embhedeni embodiments kakhulu has a embhedeni eliphezulu, futhi isikhala baphume ezansi ikuvumela ukuthi usebenzise ngokuzikhethela abanikazi.
I yokuntula izakhiwo ezinjalo zihlanganisa ematfuba ingane falling. Kodwa lokhu kuntuleka impumelelo izuzwe Amashalofu okubeka okusezingeni eliphezulu kanye izitebhisi, okuyinto ngokuvamile itholakala engela esikhundleni thwi. Uma imishini ihlukile nemvelo ephathekayo, isakhiwo (Uhlaka) iduduzekile. Ngakho-ke, ukuhambisa Loft umbhede endaweni entsha - akuwona neze umsebenzi olula.
Loft embhedeni embhedeni ngaphansi
Isici esiphawulekayo lokhu design - ikhono ihlanganise yimuphi umbhede usayizi isihlanganisi kuqala. umklamo Single ngokuvamile efakwe ngaphansi lounger perpendicularly noma offset. kwesigaba Double ngokuvamile ngokufanele ngaphansi engenhla uqimba headboard. Lokhu embhedeni Loft sokuba namantombazane njalo kuyoba efanele ikakhulukazi. Kulokhu, ungakha spalenki ethokomele nge ukukhanyisa, amakhethini, emashalofini izincwadi.
Amabili imibhede (owodwa) ngesikhathi ubude 2 amamitha imodeli ibekwe kalula perpendicular phezulu. Uma ububanzi embhedeni lingaphansi kuka-70 cm, kuba ngamasentimitha amahlanu phakathi kwazo. Kulesi Isikhala ungafaka etafuleni eliseceleni kombhede ephethe ilambu, isibonelo.
Loft embhedeni embhedeni ngaphansi kungaba ezimbili zama: nge ebhentshini elingaphansi esinqunyiwe neselula. Ku-samuntu sokuqala berths kuvikelwe, futhi ngeke ushintshe indawo. A imodeli ejwayelekile - eziyinkimbinkimbi imibhede ukuthi offset emelene nomunye obuphelele. Lokhu zokusebenza kwengqondo ilungiselelo ukhululekile xaxa ngoba ubuthongo engazizwa phansi nomuzwa wokuthi ophahleni kuthé phezu kwakhe.
Esimweni lapho embhedeni Loft nge embhedeni ngaphansi - kuyinto design ezimele, ke zingafakwa uwedwa. Ngokwesiko - ngaphansi uqimba yesibili, nge-offset. Indlela yesibili ethandwa kakhulu. Usikisela izindlela ezintathu ngokufakwa: headboard ngaphansi uqimba phezulu, nge shift emaphethelweni isikhungo. Ezinye izindaba zika-isikhala singavalwa nge ibhokisi zangaphansi, emashalofini, ekhabetheni, edeskini.
Loft embhedeni embhedeni ngaphansi (withdrawable) ingalungiswa. Kulokhu, ungqa phambili iduduzekile bese uba nomunye isakhiwo uqimba. Ngaphezu kwalokho, kungaba mobile, lapho embhedeni is ngokuphelele ikhishwa, setha ngesicelo umnikazi.
Umklamo nge usofa
Loft embhedeni usofa ezansi ikuvumela ukuba uguqule ikamelo kusukela ekamelweni ku egumbini lokuphumula. Kulokhu, kukhona isikhala esiningi, lapho ungakwazi ukudlala futhi ukuhlangabezana abangane. Kungenjalo, lapho kusofa akuyona ukubola, kuyinto ephelele isitshudeni. endaweni yomsebenzi zingafakwa kwenye indawo, kwenta sibonelo, ngekuletsa iwindi, futhi endaweni ingalali iba isivakashi.
Uma unezingane ezimbili, umbhede Loft nge embhedeni usofa phansi ukuba uhlobo oluhlukile. Kule ndaba siyafaneleka, khetha imodeli nge usofa wokudonsa phandle. Kungcono uma uzoba endaweni enkulu esihlalweni, ngangokuba ngingagudluza esikhundleni olele uma kunesidingo.
Yeka embhedeni Loft efanelekayo amantombazane?
Lo mklamo kuyinto ephawulekayo ngenxa yokuthi kungasiza ngisho egumbini kokuncane kunakho konke kuya iphenduke yangempela inkosazana lokulala. Njani ukwenza lokhu? Akunzima. Okokuqala nokusemqoka, abazali kufanele baqonde ukuthi umbhede Loft sokuba namantombazane ukuba ehlotshiswe Indwangu ocingweni lokuzenzela. Ukuze yokudalwa akubalwa babe namakhono umklami professional. Yakha kombhede Lacy, okuyinto kocingo off endaweni amageyimu kusuka lonke igumbi uzokwazi yilowo nalowo wesifazane.
Ngisho Loft embhedeni kakhulu elula izobeka phezu uqimba engezansi usofa, pouf ukhululekile, ukuhlela indlu onodoli noma ahlele ithoyizi ekhishini. kukhethwe kahle amakhethini, nezibani lodonga ukudala ikamelo umoya inganekwane, + njengasosukwini lokungivivinya ikhathuni ozithandayo endodakazini yakho. Egumbini enjalo ukuhlobisa letiphakanyisiwe satin kudabuke lace, kodwa imibala ezivamile pink ibhilikotsi.
I Art Nouveau
Uma indodakazi yakho iyasebenza futhi udlubulunda, futhi ngaphandle kwalokho, it is hhayi kakhulu bakhangwa onodoli, yena uyojabulela embhedeni yesimanje kokuba embhedeni okusezingeni eliphezulu, ngaphansi okukhona endaweni yokusebenza. Lona khetho obusebenzayo kakhulu futhi ezingokoqobo oluzosiza eminyakeni embalwa, ngisho nalapho ingane yakho iyofunda esikoleni sabaqalayo.
Ake sibheke embhedeni Loft, "Ikea". Popular ezweni lethu, i-brand linikeza amakhasimende onobuhle ezine izakhiwo ezinjalo - Svarta, Stora, Stuva eTromsø. Umbhede Loft "Ikea" kungenzeka ukuthi wenziwe ngezinto ezahlukene - metal, izinkuni. imiklamo enjalo ezidume nezingane, ngoba ukugibela izitebhisi embhedeni ethakazelisa kakhulu. Ngaphezu kwalokho, lokhu ifenisha ilungele izikhala ezincane. Ngaphansi kombhede, eziningi isikhala elikuvumela ukuba ahlele lapha ingxenye yokugcina noma indawo yokusebenzela.
Loft umbhede Metal "Olympus 6" ubhekwa enamandla kakhulu, ngoba design ifremu ekwazi ukumelana umthwalo mkhulu kunezinhliziyo izinkuni. embhedeni Esinokwethenjelwa futhi ngamandla has a onqenqemeni okusezingeni eliphezulu kanye isitebhisi. Uhlaka of a imodeli ezifana wenziwe ipayipi eziyize. Ukuze enamathela powder upende esetshenziswa abakhiqizi eYurophu.
umbono Abathengi 'asebethole wathenga embhedeni Loft izingane zabo, yini ngempela ikhambi ephelele, ungagcina eningi isikhala egumbini. Ikakhulukazi uyojatshuliswa ukuthengwa abazali babantwana ezimbili. Loft embhedeni bunks ezimbili evumela ngisho ekamelweni elincane kakhulu ukudala i ukuklanywa. I ethile kuphela zalezi zakhiwo ubizwa ngokuthi abazali intengo kunalokho okusezingeni eliphezulu.
Isiphetho nobunjalo Leo ngesikhathi sokuzalwa komuntu
Kuyini ulwandle waseRussia eningizimu? Incazelo Black, iCaspian kanye Azov ezilwandle